Ornagaime Giveaway – MYSTERY ZILLION Blog
Posted on April 8, 2011 April 21, 2011 by mzedu
CategoriesArticle Tagsgiveaway, ornagaime
49 Replies to “Ornagaime Giveaway”
ဒီဟာကိုဝယ်သုံးဖို့စဉ်းစားထားပါတယ် ဒါပေမယ့် Jail Break မလုပ်ချင်လို့ မဝယ်ဖြစ်သေးတာ
Jail Break မလုပ်ပဲသုံးလို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးမရှိဘူးလား ခင်ဗျ??
no need jailbreak. You can install from app store. Keyboard and font also built in and jailbreak is not required.
အခုပဲ ဝယ်လိုက်ပြီ 🙂
စကားမစပ် Facebook မှာ Ornagaime Myanmar to English Dictionary Fan Page မရှိဘူးလား Like ချင်လို့ 🙂
thank … here ornagai fan page https://www.facebook.com/Ornagai
I would like to getacopy of Ornagaime. 😀
ye win aye says:
Thanks for ornagaime give away. Ye Win
Very Very Nice ! Give me one ~~
မဲဖောက်ပေးမယ် ဆိုတော့ ၀မ်းသာတယ်ဗျာ..။
၀ယ်သုံးချင်ပေမဲ့…Card မရှိ…ဘာမရှိနဲ ့….။
အခုလို မဲဖောက်ပေးတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…။
Ornagai ကိုအရင် Version ကတည်းကအားပေးနေတယ်…။
အခုလည်း အားပေးမယ်..။ 😀
မရခဲ့ရင်လဲ apple store ကနေအားပေးမယ်ဗျာ
Testing my luck.. 🙂
မဲဖောက်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
I Want Ornagai !!!!!!
iPod ၀ယ်သုံးခဲ့ပြီး နောက် apple ပစ္စည်း တွေကို တိမ်းညွှတ်မိိပါတယ်၊ ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ ရူးသွတ်တာပေါ့။ apple ကလည်း စည်း နဲ့ ကမ်းနဲ့ ဆိုတော့ နည်းနည်းကိန်းခမ်း ကြီးတာလေ။ အဲဒီ နယ်ပယ်
ထဲကို ကျျွန်တော် တို့ မြန်မာတွေ အရောင်း အဝယ် သွားလုပ်နိုင်တယ် ဆို တာကိုက ဂုဏ်ယူစရာ တစ်ခု လို့ကို
မြင်ပါတယ် ။ Saturngod နှင့်တကွ IT Developer များ ဆထက်ထမ်းပိုး IT ကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ
I Q now 😀
I want Myanmar – English Dictionary foralong time. If I win the lucky draw, i will be the happiest person in the world.
ကျွန်တော်လဲ ၀င်ရောက် ကံစမ်းပြီး လိုုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
I need Myanmar_English dictionary…….
Sein Moe Lone says:
I wanna use ornagainme….
here we use german… but….
I would like to get myanmar to english….
Thanks for your myanmar app…
I Want Ornagai 🙂
လိုချင်ပါတယ်..အကိုရေ… iPad iOS 4.3.1 ပါ
အိုင်တီလောက မှာ ကျွန်တော် အားအကျဆုံးက သုံးယောက်ရှိတယ်
Myanmar Tut က ကိုသီဟ
GiVe Mi 🙂
“မဲ” ဆိုပေမယ် ့… တစ်သက်လုံးကံ မကောင်းခဲ ့တော ့မျှော်တောင် မမျှော်လင် ့ရဲပါဘူးဗျာ..
၀ယ်သု့းဖို ့လဲတတ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ် ့လိုချင်ပါတယ်..
ကံစမ်းတိုင်း ကံမပါတတ်တဲ့ ကျွှန်တော် စမ်းလိုက်ဦးမယ်ဗျ။ မြန်မာကနေ အင်္ဂလိပ်ဆိုတော့ အရမ်းလိုချင်နေတာဗျ။ ရှာနေတာလဲ နေရာစုံနေပါပြီ ဖရီးမတွေ ့ဘူးခင်ဗျ ဝယ်ဖို ့လဲ credit cardရှိဘူးရယ်။ မဲပေါက်ပါစေ ဆုတောင်းရတော့မယ်ဗျာ။ ဟီးဟီး
thank you so much for give away of Ornagaime dictionary been published to new era of myanmar Technology is being brought to us.
ပေါက်ရင်တော့ ကံထူးရှင်ပေါ့ .. ကျေးဇူးပါ
Giveee me 🙂
I also wanna try my luck.
Count on me… Thanks for giveaway.
App store မှာမဝယ်ခင် ကိုယ့်ကံကိုလည်း စမ်းကြည့်ချင်ပါတယ်
မြန်မာ ကနေ အင်္ဂလိပ်တဲ့ ..ဘုရားဘုရား…
Zwae Yan Aung says:
I need it, bro. 🙂
Han Htut Zaw says:
Ornagaime plz 🙂
Previous PostPrevious Cloud Computing Explained